BREAKING NEWS… कक्षा १२ का विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्ने बाटो खुला हुने, यस्तो छ तयारी ! [जानकारीको लागी सक्दो शेयर गरौँ] – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/BREAKING NEWS… कक्षा १२ का विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्ने बाटो खुला हुने, यस्तो छ तयारी ! [जानकारीको लागी सक्दो शेयर गरौँ]
BREAKING NEWS… कक्षा १२ का विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्ने बाटो खुला हुने, यस्तो छ तयारी ! [जानकारीको लागी सक्दो शेयर गरौँ]
काठमाडौँ – कक्षा १२ को परीक्षामा जुटेका विद्यार्थीलाई छिट्टै नै उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्ने बाटो खुला हुने भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ का विद्यार्थीको स्थगित परीक्षाको निकास दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएपछि विद्यार्थीको उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने बाटो खुल्ने भएको हो । बोर्डका (कक्षा ११ र १२ हेर्ने) परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माले विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी स्थगित परीक्षा छिट्टै लिने अन्तिम तयारीमा आफूहरू जुटेको र दशैँअघि नै हुने जानकारी दिए ।
विद्यार्थीलाई २१ दिनअघि नै पूर्वसूचना दिएर दशैँअघि नै परीक्षा लिने तयारी परिषद्का अधिकारीहरू जुटेका छन् ।